Hiob anoyi no ntoaso (1-22)
Onipa nkwa nna yɛ tiaa, na ɔhaw ahyɛ mu ma (1)
“Dua mpo, anidaso wɔ hɔ ma no” (7)
‘O, minyae a anka wode me asie Ɔdamoa mu!’ (13)
“Sɛ onipa wu a, ɔbɛtena ase bio anaa?” (14)
Onyankopɔn ani begyina ne nsa ano adwuma (15)
14 “Onipa a ɔbea awo no,Ne nkwa nna yɛ tiaa,+ na ɔhaw ahyɛ mu ma.*+ 2 Opue sɛ nhwiren, na okisã;*+Oguan te sɛ sunsuma, na ɔyera.+ 3 Nanso wode w’ani asi no so,Na wode no* akogyina asɛnnibea.+ 4 Hena na obetumi anya nea ne ho tew afi nea ne ho ntew mu?+ Obiara nni hɔ! 5 Na sɛ wɔahyɛ ne nna ato hɔ a,Bosome dodow a obedi wɔ wo nsam;Woatwa ɔhye ama no na wantra.+ 6 Yi w’ani fi no so na onnya ɔhome,Kosi sɛ obewie n’adwuma te sɛ ɔpaani.+ 7 Dua mpo, anidaso wɔ hɔ ma no. Sɛ wotwa a, ɛbɛsan afefɛw bio,Na nea afefɛw no bɛkɔ so anyin. 8 Sɛ ne ntini twintwam wɔ fam,Na ne dunsin wu wɔ dɔte mu, 9 Na enya te nsu nka pɛ a, na afefɛw,Na eyiyi nkorabata te sɛ dua foforo. 10 Nanso sɛ onipa wu a, ɔnkeka ne ho;Na sɛ onipa wu a, ɛhe na ɔwɔ?+ 11 Nsu fi ɛpo mu kɔ;Asubɔnten twe, na ɛyow. 12 Onipa nso kɔda, na ɔnsɔre.+ Bere a ɔsoro wɔ hɔ yi de, ɔrensɔre,Na ɔrennyan mfi ne nna mu.+ 13 O, minyae a anka wode me asie Ɔdamoa* mu,+Anka wode me asie akosi sɛ w’abufuw betwam,Minyae a, anka woahyɛ me da a wode bɛkae me!+ 14 Sɛ onipa wu a, ɔbɛtena ase bio anaa?+ Bere a meda so wɔ nkoasom mu* yi de, mɛtwɛnAkosi sɛ menya ahotɔ.+ 15 Wobɛfrɛ, na megye wo so.+ W’ani begyina* wo nsa ano adwuma. 16 Nanso seesei de, anammɔn a metu biara, wokan;Me bɔne nko ara na wohwɛ. 17 Wode me mmarato ahyɛ kotoku mu akyekyere ano,Na wode gluu atare me mfomso ano. 18 Sɛnea bepɔw dwiriw gu na efi hɔ,Na ɔbotan tutu fi baabi a esi, 19 Sɛnea nsu ma abo hi,Na nsu yiri hohoro asaase so dɔte kɔ no,Saa ara na wosɛe onipa dasani anidaso. 20 Wode w’ahoɔden bu fa no so kosi sɛ obewu;+Wosakra sɛnea ɔte, na wupia n’atiko. 21 Sɛ wɔhyɛ ne mma anuonyam a, onhu;Wɔbrɛ wɔn ase nso a, onhu.+ 22 Bere a ɔte ase* nko ara na ɔte yaw;Na bere a ɔda so* te ase nko ara na odi awerɛhow.”
^ Anaa “ateetee nko ara.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “wotwa kyene.”
^ Nt., “me.”
^ Anaa “Wobɛfe.”
^ Anaa “Bere a ɔda so wɔ ne honam mu.”
^ Anaa “ne kra da so.”